Golaha ammaanka oo shir deg-deg ah ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Golaha ammaanka oo shir deg-deg ah ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya
Sida uu xaqiijiyay xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya, Golaha Amaanka ee qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in ay saacadaha soo socda kulan ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya .
James Swan, ergayga gaarka ah xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa la filayaa in warbixinadii ugu dambeeyay ee dadaalada qaramada Midoobay uu u gudbiyo shirka.
Golaha ammaanka ayaa xoogga saaraya sidii loo qaban lahaa doorashooyinka Soomaaliya muddo gaaban si xasiloon oo ay wada-ogol yihiin madaxda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada oo saxiixay heshiiskii 17-kii bishii sagalaad ee sanadkii hore.
Fadhiga Golaha ammaanka oo ku qabsoomaya qaabka Muuqaal Fogaan-aragga waxaa dhankooda la dhageysanayaa danjirayaasha wakiilka ka ah 5-ta dal ee joogtada ah iyo 10-kale ee ku yimaada doorashooyinka si xog-uruurintooda gaba-gabada kulanka loogu soo daro war- saxaafadeedka ku saabsan natiijada ka soo baxdo kulankaas.
Previous articleDHAGEYSO:Dhallinyarada oo loogu baaqay in ay hal abuur ganacsi sameyaan
Next articleRa’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo la kulmay kaaliyaha sare ee maxkamadda cadaaladda adduunka